▷ Hagaha Muhiimka ah si aad u gasho ICloud - 【 TechRadar 】 2022
Habka soo gelida iCloud waxay bixisaa qiimo badan oo aan u baahnayn fikir badan. Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato soo galitaanka iCloud iyo sida aad uga faa'iidaysan karto.
1 Waa maxay Saxiixa iCloud?
2 Aqoonsiga Apple iyo iCloud soo gal
3 Sida loo galo iCloud
4 Aaway galitaanka iCloud?
5 Sida loo mideeyo Apple ID
5.0.1 [Sidoo kale akhri: Sida looga fogaado bixinta Apple ee kaydinta iCloud ee dheeraadka ah]
6 Sideen ku arkaa qofka lagu soo galay iCloud-kayga?
7 Waa maxay iCloud kabashada xogta?
8 Kala saarida Xogta iCloud
Waa maxay Saxiixa iCloud?
Marka hore, xasuusin degdeg ah oo aasaaska ah:
ICloud-ka Apple wuxuu awoodaa abka iyo adeegyada badan wuxuuna u shaqeeyaa sidii xabag si ammaan ah uu awood ugu yeesho sifooyin awood leh sida isku xidhka dukumeentiyada iyo xogta aaladahaaga Apple iCloud Drive, Apple Pay, iyo in ka badan.
Bogga Xaaladda Nidaamka iCloud waa habka ugu wanaagsan ee lagu fahmi karo sida wanaagsan ee iCloud u taageerto nidaamka deegaanka ee Apple. Eeg hareerahaaga waxaad ka heli doontaa 65 adeeg oo halkaas ku taxan. Kuwaas waxaa ka mid ah adeegyo badan oo laga yaabo inaadan horay u maqlin, qaar laga yaabo inaadan isticmaalin, iyo adeegyo kala duwan oo aad hore ugu tiirsanaan karto shaqada, sida diiwaangelinta qalabka iyo iibsashada mugga.
Login iCloud waa furaha qaybtan beerta Apple.
Markaad ku soo gasho iCloud aalad leh Aqoonsiga Apple (taasina waxaa ku jira qaar ka mid ah aaladaha aan Apple ahayn marka aad isticmaasho apps ama adeegyo karti u leh iCloud, sida Music), waxaad geli kartaa qaar ama dhammaan adeegyadan.
Horumariyeyaasha qolo saddexaad waxay sidoo kale isticmaalaan iCloud, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qaabka CloudKit ee Apple iyo agabka ay u isticmaalaan si ay u dhisaan abka isku xira aaladaha oo dhan.
Waxaas oo dhan waxay ku salaysan yihiin aqoonsiga Apple iyo login iCloud.
Aqoonsiga Apple iyo iCloud soo gal
Aqoonsigaaga Apple waa furaha iCloud iyo dhammaan adeegyada Apple.
Markaad ku soo gasho aaladda aqoonsiga Apple, waxaad sidoo kale soo gashay iCloud. Aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo macluumaadkan, markaa aqoonsigaaga Apple waa in lagu ilaaliyo furaha alphanumeric adag oo aad xasuusan karto (iyo sidoo kale waa in lagu ilaaliyo xaqiijinta laba-factor).
Waxaad bedeli kartaa aqoonsiga Apple oo aad maamuli kartaa akoonkaaga adigoo isticmaalaya website-ka aqoonsiga Apple.
Sida loo galo iCloud
Qalabka Apple: Waxaad ka gali kartaa iCloud iPhone, iPad, Mac, ama Apple TV. Waa inaad ku soo gasho isla aqoonsiga Apple ee dhammaan aaladahaaga si aad u isticmaasho iCloud si aad isugu dhejiso xogta iyo adeegyada mid kasta oo iyaga ka mid ah. Haddii aad haysato laba aqoonsi oo Apple ah, ma awoodi doontid inaad si fudud ugu wadaagto hal qalab sababtoo ah falsafada nidaamka waa in la ilaaliyo isticmaalaha.
On Windows: Waxa kale oo aad heli kartaa macluumaadka iCloud qaarkood iyo adeegyada Apple PC Windows adiga oo isticmaalaya iCloud app ee Windows. Waxaad ka heli kartaa tiro xadidan oo adeegyo ah (Muusik, TV+) aaladaha kale adigoo isticmaalaya apps gaar ah.
Safka: Ugu dambeyntii, waxaad sidoo kale geli kartaa xogta ku kaydsan iCloud online iyada oo loo marayo browser-ka waafaqsan heerarka iCloud.com. Halkaa waxa aad ka geli kartaa Boostada, Xiriirada, Jadwalka, Sawirada, xogtaada iCloud Drive, Notes, Xusuusin, oo isticmaal Find My, Pages, Numbers, iyo Keynote. Waxa kale oo aad maamuli kartaa goobo kala duwan, maamuli kartaa Wadaagista Qoyska, iyo hawlo kale oo kala duwan adoo isticmaalaya iCloud online. Sidaa darteed, waa muhiim inaad hubiso inaad isticmaasho furaha sirta ah si aad u ilaaliso akoonkaaga.
Sida loo galo iCloud on Android: Sida kaliya ee aad iCloud uga heli karto aaladda Android waa in aad isticmaasho browser-ka si aad u gasho iCloud online. Ma isku dhejin kartid abka sidan
Aaway galitaanka iCloud?
Saxiixa iCloud waa inuu si toos ah u dhacaa markaad gasho aqoonsiga Apple markaad dejinayso aaladdaada Apple. Haddii sabab qaar ka mid ah aadan dejin karin nidaamka, ama haddii aad qorsheyneyso in aad bedesho qalab aad si ay ula shaqeeyaan Apple ID ka duwan, waxaad ka heli iCloud Settings (iOS, iPad OS) ama System Preferences (Mac). Marka hore waxaad u baahan tahay inaad abuurto kayd.
On Mac: Taabo Aqoonsiga Apple> Dulmar> Bixinta (ama Soo gal) oo raac tillaabooyinka lagu bixiyay.
On iPhone/iPad: Taabo Aqoonsiga Apple, hoos u dhaadhac oo taabo Sign Out oo raac tillaabooyinka lagu siiyey si aad ugu soo gasho aqoonsiga Apple kale.
Markaad ka baxdo iCloud, waxaad waayi doontaa dhammaan xogta ku kaydsan aaladda, laakiin waa inaad ku kaydisaa akoonkii iCloud ee aad isticmaalaysay.
Sida loo mideeyo Apple ID
Haddii aad haysato aqoonsiyo badan oo Apple ah, nasiib baad leedahay. Apple si badheedh ah ayuu u dhigayaa isagoo noo sheegaya, "Haddii aad haysato aqoonsiyo badan oo Apple ah, ma ku dari kartid."
Si kastaba ha ahaatee, Apple waxay u ogolaataa xalalka maareynta qalabka moobiilka si loo hirgeliyo kala-soocidda xogta si loo ilaaliyo xogta shaqada ee qalabka shakhsi ahaaneed (eeg hoos).
[Sidoo kale akhri: Sida looga fogaado bixinta Apple ee kaydinta iCloud dheeraad ah]
Sideen ku arkaa qofka lagu soo galay iCloud-kayga?
Haddii aad u malaynayso in qof ka soo galay akoonkaaga iCloud qalab aan kaaga ahayn, waa inaad booqataa Aqoonsiga Apple. Soo gal, ka dibna dhagsii Aaladaha. Hadda waxaad arki doontaa dhammaan qalabka ku xiran xisaabtan iCloud.
Waxa kale oo aad ka arki kartaa on iPhone / iPad in Settings> Account Name halkaas oo aad ka heli doontaa liiska qalabka oo dhan; on Mac ah, gudaha System Preferences> Apple ID, u rog bidix. Waxaad sidoo kale hubin kartaa aaladaha lagu soo saxiixday iCloud ee Windows gudaha Faahfaahinta Xisaabaadka> Maamul Aqoonsiga Apple.
Apple vous avertit lorsque de nouvelles connexions ont lieu : haddii aad hawl galisay xaqiijinta a deux facteurs, toute personne tentant d'accéder à votre compte aura kissin d'a verification code fourni via l'a de vos appareils ou méléphones de léphone la aamini karo Haddii qof uu soo galo akoonkaaga iCloud, waa inaad heshaa iimayl ku ogeysiinaya.
Shirkaddu waxay sidoo kale hirgelisay kontaroolo kala duwan si ay u ilaaliso iCloud ee Windows.
Waa maxay iCloud kabashada xogta?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay soo kabashada xogta iCloud. Tani waa xal dhawaan laga soo saaray Apple si loo caawiyo dadka lumiyay helitaanka akoonkooda sababo jira awgood. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dib u hesho xogtaada inteeda badan, laakiin ma soo celin kartid Keychain-kaaga, Wakhtiga Shaashadda, ama xogta caafimaadka sababtoo ah macluumaadkani waa sir. Xataa Apple ma samayn karto.
Waxaad ka heli kartaa Adeegga Soo-kabashada Xogta ICloud ee qaybta Soo-kabashada Xisaabaadka ee hoos yimaada Password & Security. Waa in aad dooratid in aad dhaqaajiso furahaaga soo kabashada ama aad meelayso xidhiidh soo kabasho.
Xaaladda dambe, xidhiidhkan ayaa heli doona kood ay ku geli karaan oo ay ku furi karaan akoonkaaga. Xulashada Furaha soo kabashada waxay ku siinaysaa fure gaar ah oo ay tahay inaad qorto oo aad ku kaydiso khasnadda bangiga ama meel kale, maadaama qof kasta oo heli kara uu dib ugu soo ceshan karo akoonkaaga. Natiijooyinka ugu wanaagsan, ku dar qof aad ku kalsoon tahay inuu u dhaqmo sidii xiriiriyahaaga soo kabashada, ama waxaad sidoo kale dejin kartaa furaha soo kabashada.
Kala saarida Xogta iCloud
Haddii aad isticmaasho qalab shaqo ama aad haysato qalab shakhsi ah oo ku diiwaan gashan (sida caadiga ah iyada oo loo marayo Apple Business ama Apple School Manager) ka dibna ay maamusho nidaamka maareynta qalabka mobile sida kuwa ay bixiso Apple Business Essentials, Jamf, Kandji, Mosyle iyo kuwa kale. , waxaa suurtagal ah in la kala saaro xogta shakhsi ahaaneed iyo xogta ganacsiga. Habkani wuxuu dhacaa inta lagu guda jiro nidaamka diiwaangelinta isticmaalaha, marka IT codsan kartaa kala soocidda cryptographic si ay u kala soocaan ganacsiga iyo xogta shakhsiyeed. Tani waxay la macno tahay in haddii shaqaaluhu ka tago shirkadda, loo-shaqeeyaha hore wuxuu ka saari karaa dhammaan xogta shaqada ee qalabka iyada oo aan saameyn ku yeelan macluumaadka isticmaalaha.
Nidaamkan waxa kale oo uu noqon karaa mid otomaatig ah, markaa dukaamada iPad-ka ee la wadaago iyo jardiinooyinka dugsiyada waxaa lagu soo celin karaa warshadda inta u dhaxaysa isticmaalka.
Ma haysaa su'aalo kale ama macluumaad aad la wadaagto oo ku saabsan iCloud ama saxiixida iCloud? Fadlan i ogeysii